Shenzhen DingQi fonosana Co., voafetra dia naorina tamin'ny 2012 taona. Ny Mpanorina nahazo diplaoma avy any Shenzhen anjerimanontolo amin'ny mari-pahaizana maîtrise tao fitaovana majored siansa. Ny orinasa dia ny foibeny ao amin'ny distrikan'i Shenzhen LongGang any Shina. Ankehitriny Manana mihoatra ny 500 ny mpiasa.
Miara-miasa amin'ny College izahay ny simia sy ny injeniera any Shenzhen simika oniversite hanao Rearch Job. Tsy mijery ny Simika afa-po sy ara-batana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fananana fitaovana ao Shenzhen University, toy ny Chromatography adihevitra, Red spectrometer, Sem.
Manana orinasa telo. Any amin'ny orinasa iray XingBuXing Road ny LongGang In Shenzhen. Orinasa iray miorina ao amin'ny faha-5 Floor, RuiChang Industrial DongGuang Park. Orinasa iray no misy ao Wenzhou tanàna. Ary ny orinasa mihoatra ny 10000 manarona toradroa. Izahay, ka mamoaka samy hafa karazana tao fonosana toy ny laminated paosy, PVC paosy, Fanomezana paosy, taratasy sy ny boaty sns indrindra ny pamokarana dia mandeha ho azy ny famokarana. Manana 125 mpiasa kinga. Misy 4 Pirinty natao tamin'ny injeniera efa 15 taona ny asa efa nataonao. Dimy QC manana traikefa 10 taona asa. Ny fahaiza-dia 100000 baoritra ny fonosana isan'andro.
Manana fanaraha-maso ny kalitao Excellent ekipa. Ny orinasa dia strickly amin'ny fonosana Quality. Akora rehetra ireo sakafo kilasy. Ny ekipa QC dia hijery ara-batana sy ny toetra mampiavaka ny Raw fitaovana, rehefa avy mpamatsy. Famokarana rehetra dingana ho amin'ny teny anglisy ny ekipa QC.
Raha ny Service, dia manome 6-20 an-tsipika matihanina Pre-fivarotana, nivarotra sy Ankehitriny-Sale fanompoana hamaha misy fanontaniana momba ny filaminana. Na oviana na oviana, misy fepetra takiana, dia hahazo haingana Reply avy ny tsara ofana sy sariaka fanohanana mpiasa.
Tsy manome fonosana paosy namboarina ho an'ny rehetra manerana izao tontolo izao. Isika mandresy be dia be ny mpanjifa, noho ny paosy tsara kalitao sy ny asa fanompoana tsara dia tsara. Ankehitriny dia efa nahazo mpanjifa maro sady tsara laza avy amin'izao tontolo izao, indrindra fa any Amerika, Kanada, Aostralia, Newzland, Eoropa sns
Clear Plastic Mijoroa Up Pouches , Kraft Paper Resealable Bags , Mijoroa Up paosy fonosana plastika , Mijoroa paosy fonosana , Clear Mijoroa Up Pouches , Mijoroa paosy Bags ,